China Desktop Manual Rockwell ekweghị ekwe Tester HR-150A ụlọ ọrụ na-emepụta | KAIRDA
Desktop Manual Rockwell ekweghị ekwe Tester HR-150A na-bụ-eji iji chọpụta Rockwell ekweghị ekwe nke ferrous ọla, na-abụghị ferrous ọla na ndị na-abụghị dara ihe.
Enwere ike ịgbanwe ọsọ ọsọ nke nrụgide ule site na ngwaọrụ echekwa, a na-enwetakwa ngbanwe nke nrụgide site na ịtụgharị nke nrụgide na-ahọrọ wiilị aka. Ọrụ nke onye nyocha ahụ dị mfe, ebe arụmọrụ ahụ kwụsiri ike ma si otú ahụ nwee ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ dịgasị iche.
Nrụgide nke Mbụ 98N,
Ike zuru ezu 588N, 980N, 1471N,
Nkọwapụta nke Indenter Nkịtị diamond Rockwell indenter, 1.5875 mm bọl indenter
Max elu nke ụdị (mm) 170mm
Anya site n’etiti Indenter rue OuterWall 165mm
Igwe Igwe (DXWXH) (mm) 510 × 230 × 750
Ibu (n'arọ) 85
NWOK 20 ～ 100
Mgbe ị na-atụ, biko họrọ ihe ntinye na ike nyocha niile dịka tebụl na-esonụ.
Ọnụ Ule Niile N (kgf)
Ihe Ngosiputa Uzo
Ball1.5888mm ígwè bọl
120 ° diamond
A na-eji ya iji tụọ ọla ahụ, nke ike ya karịrị HRC 70 (dịka tungsten carbide alloy, wdg) yana kwa iji tụọ ihe mpempe akwụkwọ siri ike na ihe akụrụngwa dị n'elu.
Akara S: A na-eji ya iji sie ike nke okpomọkụ na-eme ka akụkụ ígwè.
Akara B: A na-eji ya atụ ọla nchara ma ọ bụ nke etiti siri ike na akụkụ nchara anaghị ekpuchi.
2 Nnukwu uzo anumanu 1
3 Obere obere ewepụghị 1
6 Ngwongwo ígwè nchara Φ1.588mm 1
7 Steel bọl Φ1.588mm 5 （ọnwụ sọ）
8 Rockwell ọkọlọtọ ngọngọ 80-88HRA 1
9 Rockwell ọkọlọtọ ngọngọ 85-95HRB 1
10 Rockwell ọkọlọtọ ngọngọ 60-70HRC 1
11 Rockwell ọkọlọtọ ngọngọ 35-55HRC 1
12 Rockwell ọkọlọtọ ngọngọ 20-30HRC 1
13 Nnukwu ịkwọ ụgbọ ala 1
14 Obere ihe ntanye 1
15 Igbe enyemaka 1
16 shieldjá ọta 1
17 Ọrụ nkuzi 1
18 Akwụkwọ 1
Ndepụta nkwakọba ihe 1
IND OF ANYA NT HARTA AHD
1.Ọ bụrụ na onye na-anwale ahụ anaghị eji ya ogologo oge, ọ ga-ekpuchi ya na mkpuchi uzuzu uzuzu.
2. Mejupụta mmanụ ụfọdụ oge site na kọntaktị nke ịghasa (26) na mkpịsị aka (27).
3.Buru iji ihe nyocha ahu, mee ka elu nke nkedo (26) na elu elu nke anvil.
4.Ọ bụrụ na uru ike gosipụtara gosiri na ọ bụ nnukwu njehie:
1) Wepu ihe anvil ma lelee ma elu ya a kpọtụrụ ya na dị ọcha
2) Lelee ma jaket nchekwa ahụ na-akwado eriri.
3) Lelee ma penetrator emebi.
5.When itinye isi ule ike, ihe ngosi pointer na-agbagharị ọsọ ọsọ na mbido wee jiri nwayọ, ọ pụtara na mmanụ igwe na nchekwa dị obere. N'okwu a, bulie mmetụta ahụ dị na elu nke nchekwa (7), jupụta mmanụ mmanụ dị nwayọ nwayọ ma ugbu a na-agbanye ma dọpụta ọtụtụ oge ejiri (15) (16) iji nweta piston na ala ugboro ugboro , ma kpochapu ikuku kpamkpam site na nchekwa ruo mgbe pistin ahụ dara na ala na mmanụ na-ekpuchi ya.
6.Use ọkọlọtọ ule ọkọnọ na tester na-elele oge ziri ezi nke ekweghị ekwe tester.
1) Hichaa anvil na ọkọlọtọ ọkọlọtọ ma jiri ule rụọ ọrụ na-aga n'ihu ule. Enweghi ike ịnwale ya na elu ya na-akwado ya.
2) Ọ bụrụ na njehie nke uru ahụ egosiri bụ nnukwu, ma e wezụga ịlele dịka ihe 4 dị na isi a, lelee ma elu nkwado nke ọkọlọtọ ule ọkọlọtọ dị na anụ. Ọ bụrụ na nke a, jiri nkume mmanụ mee ya.
3) Ọ bụrụ na ịnwale na ọkọlọtọ ọkọlọtọ n'ọnọdụ dị iche iche, a ga-adọta ngọngọ ahụ n'elu anvil ma ghara iwepụ ya na anvil.
Nke gara aga: Ultrasonic ekweghị ekwe Tester KH270W
Osote: Digital Bench Rockwell ekweghị ekwe Tester HRS-150
Shore Durometer ekweghị ekwe Tesre A Sore D ...
Ultrasonic ekweghị ekwe Tester KH270W